I-Google izonika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ngokuzenzakalela kwawo wonke umuntu | Kusuka kuLinux
I-Google ivuliwer muva nje usebenzela ukwenza bonke abasebenzisi baqale ukusebenzisa ubuqiniso bezinto ezimbili (2FA), engavimbela abahlaseli ekutholeni ukulawula ama-akhawunti akho ngokusebenzisa iziqinisekiso ezonakalisiwe noma ngokuqagela amaphasiwedi.
Ngesikhathi soSuku Lwephasiwedi Lomhlaba, i-Google imemezele ukuthi maduzane izosebenzisa ukusebenza okuzenzakalelayo kokuqinisekiswa kwezinto ezimbili kwabo bonke abasebenzisi.
UMark Risher, umqondisi wokuphathwa kwemikhiqizo, ubunikazi nokuphepha komsebenzisi kwaGoogle, uthe:
“Ungase ungakuqapheli, kodwa amaphasiwedi ayingozi enkulu ekuvikelekeni kwakho ku-inthanethi: kulula ukuntshontsha, kunzima ukukhumbula, futhi kuyisidina ukuphatha. Abantu abaningi bacabanga ukuthi iphasiwedi kufanele ibe yinde futhi ibe yinkimbinkimbi ngangokunokwenzeka, kepha ezimweni eziningi lokhu kungakhuphula ubungozi bezokuphepha. Amaphasiwedi aqinile abangela abasebenzisi ukuthi bawasebenzisele i-akhawunti engaphezu kweyodwa; empeleni, ama-66% aseMelika avuma ukusebenzisa iphasiwedi efanayo kumasayithi angaphezu kwelilodwa, eshiya wonke lawa ma-akhawunti asengozini uma eyodwa ihluleka.
“Ngo-2020, ukuseshwa kokuthi 'livikeleke kangakanani iphasiwedi yami' kukhuphuke ngo-300%. Ngeshwa, ngisho namaphasiwedi aphephe kakhulu angafakwa engozini futhi asetshenziswe ngumhlaseli, ngakho-ke sitshale imali kuzilawuli zokuphepha ezikuvimbela ekusebenziseni amaphasiwedi abuthaka noma abekeke engozini. "
Isinyathelo sokunika amandla ngokuzenzakalela ubuqiniso bezinto ezimbili ihlose ukukhulisa ukuphepha kwama-akhawunti womsebenzisi we-Google ngokususa "usongo olubaluleke kakhulu" olusiza ukugenca: amaphasiwedi okunzima ukuwakhumbula futhi, okubi nakakhulu, kulula ukuweba.
NgokukaMark Risher, enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuvikela i-akhawunti kuphasiwedi embi noma eqhekekile ukusetha indlela yesibili yokuqinisekisa, enye indlela yokuthi i-akhawunti yakho iqinisekise ukuthi ukuxhumana kwakho ngempela. Ukhumbule ukuthi iGoogle ibisenza lokhu iminyaka "iqinisekisa ukuthi i-akhawunti yakho ye-Google ivikelwe amazinga ahlukahlukene wokuqinisekisa."
Njengesinyathelo sokuqala maqondana nale nqubo, inkampani izobuza abasebenzisi asebevele bavumela ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ubenze baqinisekise ubunikazi babo ngokuthepha umlayezo ovela ku-Google ku-smartphone yabo njalo uma bengena ngemvume.
Sizoqala maduzane. Nika amandla ngokuzenzakalela ukufakazela ubuqiniso bezinto ezimbili kubasebenzisi abanama-akhawunti amiswe kahle. (Ungahlola isimo se-akhawunti yakho ku-Security Control). Ukusebenzisa iselula yakho ukungena ngemvume kunika abasebenzisi ithuba lokuqinisekisa eliphephe kakhulu kunamaphasiwedi wodwa. "
Kulabo kini abanentshisekelo yokukwazi ukunika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ku-akhawunti yakho ye-Google manje, vele iya kusixhumanisi esilandelayo Chofoza inkinobho ethi "Qalisa" ukuze ungeze isendlalelo esingeziwe sokuphepha.
Uma ukufakazela ubuqiniso bezinto ezimbili kuvunyelwe ku-akhawunti yakho (kulungiselelwe ukusebenza ngamakhodi wemiyalezo yombhalo / wezwi, uhlelo lokusebenza lwe-Google Authenticator, noma okhiye bokuphepha), uzovimba ukufinyelela okungagunyaziwe ngokwakha ungqimba Okokuvikela okungeziwe okwenzelwe ukuvimbela imizamo yokungena ngemvume enonya.
Lokhu kusho ukuthi abahlaseli ngeke bakwazi ukulawula noma ngabe bekwazi ukweba imininingwane yakho, ngaphandle kwalapho benokufinyelela kudivayisi yakho ukuqinisekisa imizamo yakho yokungena ngemvume enonya.
Lapho i-2FA inikwe amandla, uzokwaziswa ukuthi ufake iphasiwedi yakho, njengenjwayelo, isikhathi ngasinye lapho ungena ku-akhawunti yakho yakwa-Google. Noma kunjalo, kuzodingeka uqinisekise ubuwena usebenzisa ikhodi ethunyelwe ngomlayezo wombhalo, ikholi yezwi noma uhlelo lokusebenza lweselula. Uma une-password, ungayifaka futhi embobeni ye-USB yekhompyutha yakho ukuqinisekisa ukuthi uzama ukuxhuma.
“Siphinde sihlanganise ubuchwepheshe bezokuphepha obusezingeni eliphezulu kumadivayisi okwenza lokhu kufakazelwa kwezinto eziningi kube sobala futhi kuphephe kakhulu kune-password. Isibonelo, sihlanganise okhiye bethu bokuphepha ngqo kumadivayisi we-Android futhi saqalisa uhlelo lwethu lokusebenza le-Google Smart Lock le-iOS. Abasebenzisi manje sebengasebenzisa izingcingo zabo njengendlela yesibili yokuqinisekisa. "
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngakho, ungaxhumana nemininingwane ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Google izonika amandla ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ngokuzenzakalela kuwo wonke umuntu